दूधकोशीको बजेट २१ करोड ८० लाख - Everest Dainik - News from Nepal
दूधकोशीको बजेट २१ करोड ८० लाख
सोलुखुम्बु, असोज ५ । दूधकोशी गाउँपालिकाको पहिलो गाउँसभाले नीति तथा कार्यक्रमको साथमा चालु आव २०७४-७५ को बजेट सार्वजनिक गरेको छ ।
बुधबार सम्पन्न गाउँसभाले रु २१ करोड ८० लाख ७ हजारको बजेट सार्वजनिक गरेको हो । सडकलाई प्राथमिकता दिँदै बजेट सार्वजनिक गरिएको गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष जुनिता मगरले जानकारी दिनुभयो । उक्त बजेट गाउँपालिकाको विकास र समृद्धिका लागि हरेक वडा कार्यालयसम्म सडक सञ्जाल पु¥याउने गरी विनियोजन गरिएको छ ।
याे पनि पढ्नुस कांग्रेसका प्रवक्ता शर्माको बजेटमा प्रतिक्रिया: अर्थमन्त्री जिम्मेवार बन्न खोज्नु भएको हो वा डराउनु भएका हो ?
सोलु दूधकुण्डको बजेट ४४ करोड ९२ लाख
जिल्लाको एक मात्र नगरपालिका सोलुदूधकुण्डले चालु आव २०७४–७५ का लागि रु ४३ करोड ९२ लाख ५१ हजार बजेट पारित गरेको छ ।
सडकलाई प्राथमिकतामा राख्दै बजेट पारित गरेको हो । सडक स्तरोन्नतितर्फ रु १८ करोड ३१ लाख २५ हजार, सडक विस्तारका लागि रु ७५ लाख, पर्यटन पूर्वाधारका लागि रु एक करोड ३३ लाख २५ हजार, शिक्षामा रु ९७ लाख ५० हजार र स्वास्थ्यमा रु ४५ लाख विनियोजन गरिएको नगर प्रमुख नाम्गेल जाङ्बु शेर्पाले जानकारी दिए ।
याे पनि पढ्नुस प्रदेश मन्त्री भन्छन्, ‘बजेट संघीयताको मर्मविपरीत’
नगरसभाले तरकारी तथा फलफूल बजारको स्थापनासहित कृषिमा रु ५५ लाख, सडक सौर्य बत्तीसहित ऊर्जामा रु ६९ लाख, खानेपानी योजनामा रु ५५ लाख, नगरपालिकाको १० वटै वडामा इमेल इन्टरनेटको पहुँच पु¥याउनका लागि रु १५ लाख, सङ्घसंस्था अनुदान तथा मागमा आधारित साझेदारी कार्यक्रम सञ्चालनका लागि रु ३५ लाख, दैवीप्रकोप राहत तथा उद्धार कोषका लागि रु १० लाख र भैपरी आउने खर्चका लागि रु २५ लाख विनियोजन गरिएको छ ।
याे पनि पढ्नुस थप १२ ठाउँमा सुरुङमार्ग बन्दै, अध्ययनलाई कति बजेट ?
यस्तै, नगरपालिकाले आफ्नै नगर प्रहरीको व्यवस्था गर्ने निर्णय गरेको छ । सो कार्यका लागि रु ५० लाख बजेटको व्यवस्था गरेको छ ।